जय गिदी ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
जय गिदी !
बैशाख ४, २०७८ शनिबार १८:८:४८ | उज्यालो सहकर्मी
नारायण कोइराला / पाल्पा, हाल यूएई ।
बिहानैदेखि टाउको भित्रको गिदीमा अनेक तरङ्ग आइरहेको थियो । एकातिरको गिदी एक थोक सोच्छ भने अर्कोतिरको गिदीले अर्कै । यो गिदी किन दुईतर्फ भएको होला जस्तो लागेको थियो । एकतर्फ भएको भए एकथोक मात्र सोच्ने थियो होला ।
म कसको समर्थन गरूँ ? आफैमा अलमल थिएँ । कसलाई समर्थन गरूँ या कसको विरोध ? तातेको गिदीलाई सम्हाल्न गाह्रो भए पनि असम्भव छैन भन्ने भरोसा चाहीँ थियो । हुन पनि खाली दिमागमा सैतानी कुराको राज हुन्छ भन्थे । साँच्चै पो हो रहेछ ।
मेरो गिदीभित्र ज्वाला त्यसै पड्किएको थिएन । त्यसको पछाडि कारण पनि छ । जब मेरो गिदीले त्यतातिर सोच्न थाल्यो । मेरो सधैँ बादल लागे जस्तो हुने अनुहार किन हँसिलो भयो ? आफैलाई थाहा थिएन । सानो कुरोमा पनि आफ्नो गिदीलाई किन यति दुःख दिनु ?
उसको लागि भने गिदी नै सकिने गरी टाउको दुःखेको होला । गिदी त गिदी हो र सोच्छ नै । सोचिरहन्छ । कति सोच्न परेको हो कुन्नि ?
गिदी पनि अनेक प्रकारका । मतलबी गिदी, कमजोर गिदी, राम्रो गिदी, नराम्रो गिदी, गोबर भरिएको गिदी, पपजी भरिएको गिदी, ठूलो गिदी, सानो गिदी, राजनीतिक गिदी, बनेको कुरा बिगारेर आफैलाई ठूलो बन्नु पर्ने गिदी । यस्तै, परदेशमा काम र चिन्ताले थाकेको गिदी, कोरोना प्रकोपले तर्साएको गिदी आदि आदि । कस्तो आफैमा अचम्मको गिदी । वर्णन गरेर नभ्याइने गिदी ।
अब अहिले चल्दै गरेको गिदीको वर्णन गरौं । आफ्नो, राम्रो तरिकाले चलेको नीतिलाई किन परिवर्तन गर्नुपर्ने ? राम्रा गिदी, नराम्रा गिदी किन मिलाउन खोज्नु ? गिदी भित्र पनि लोभ र लालचको भण्डार हुने रहेछ । राम्रो गिदी मात्र किन बनेन ? हुन त सन्तान थरी थरीका भन्छन् यही भएर हो कि । आफ्नै समकालीन साथीभाइसँग पनि मिल्न नसक्ने गिदी । किन अरूलाई सम्हाल्न खोज्नु ? सडकमा हामी यता छौं भनी पोष्टर लिएर उभिने गिदी पनि उही । अर्को गिदीले हुन्न भनेपछि फेरि मिलेको गिदीसँग छुटिनुपर्ने । अनि फेरि पुरानो बाटो समाउन बाध्य हुनुपर्ने गिदी पनि उही ।
फेरि छुटिएकासँग मिल्न त्यो गिदी जस्तोसुकै समस्या आए पनि तयार नहुने । कस्तो गिदी हो यो ? एउटाले अर्कोसँगै छँदा तारिफ नै गर्नुपर्ने र अलिकति तालमेल नमिल्दा फेरि अनुशासनको कारबाही हुने । आफनै साथी हुा् भनेर फेरि आफ्नै साथीको गिदीले सहन नसक्ने । कारबाहीमा पर्नेको गिदी त तात्ने नै भयो । अनि आफ्नो साथीलाई कारबाही गर्दा किन हाँस्नु ? कारबाही गर्न सोच्ने गिदी ।
कुन गिदीको समर्थन गर्ने र कुनको नगर्ने । सामान्य गिदीहरु अचम्म पर्नुपर्ने । हिजोका हितैषी गिदी आज दुश्मन जस्तो गिदीमा परिवर्तन हुन पर्ने । सामान्य गिदी कस्को पछि लाग्ने ? कुन गिदी राम्रो कसरी छुट्याउने ? कहिले पञ्चायतले रुवाएको गिदी । कहिले प्रजातन्त्र आयो भनेर खुसी भएको गिदी । सत्र हजार मान्छे मर्दा पनि सम्हालिएको यो गिदी । अनि गणतन्त्र आएपछि मक्ख परेको यो गिदी । देश विकास गर भनेर प्रचण्ड बहुमत दिने यही गिदी । तर फेरि फुटेर तहसनहस भएको यो राजनीतिक गिदी । जनताको आशा विपरित चल्ने छल कपट गिदी । गिदीका वर्णन गर्दा गर्दै फुट्न लागेको आफ्नै गिदी ।
नेपालको राजनीतिक गिदी, न कुनै विधान, न कुनै कानुन । सडेगलेको गिदीको सफाइ भएर तन्दुरुस्त राजनीतिक गिदीकाे नयाँ परम्परा छाओस् । जय गिदी ।